DAAWO VIDEO:-Beesha Maxamuud Ibraahim ee Majeerteen oo Bayaan ka soo saartey xaaladda guud ee maamulka Puntland | Saadaal Media
DAAWO VIDEO:-Beesha Maxamuud Ibraahim ee Majeerteen oo Bayaan ka soo saartey xaaladda guud ee maamulka Puntland
Dec 31, 2016 - jawaab
Beesha Maxamuud Ibraahim oo ka mid Beelaha Majeerteen ee dega gobalka Mudug ayaa Bayaan ka soo saartey xaaladda guud ee Puntland, kuwaasoo Beelaha dhistay maamulka Puntland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan samata bixinta Puntland.
Kulankaan ay Beesha Maxamuud Ibraahim ka soo saartey bayaanka ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaasoo ay ka soo qayb galeen, Cuqey, Isimo, Nabaddoono, Samaddoono, Aqoonyahanno, Indheergarad, Dhalinyaro, Haween iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee waxgaradka Beesha Maxamuud Ibraahim.
Nabaddoon Faarax Sanwayne oo ka mid ah Odayaashii Dhaqanka ee Beesha Maxamuud Ibraahim oo kulankaan ka hadlay ayaa sheegay in Xukuumadda Puntland aanay marnaba waxba ka qaban xaaladda amni ee gobalka Mudug iyo abaaraha ku habsaday gobalka iyo dilalka qorshaysan ee mar walba ka dhaca magaalada Boosaaso.
Caaqil Saciid Xasan Cali oo ka mid ahaa waxgaradkii kulankaan ka hadlay ayaa isagana sheegay in Beesha Caalamka ay la qaybsanayaan welwelka ay ka muujisay Sharci ahaanta Doorshadii Aqalka Sare, taasoo uu ku sheegay mid aan waafaqsanayn Dastuurka Fedaraalka ah.
Ugu dambayntii waxaa halkaas laga akhriyay Bayaankii ay si wadar ah Beesha Maxamuud Ibraahim uga soo saartey xaaladda guud ee Puntland, kaasoo uu halkaas ka akhriyay Wasiiru-dawlihii hore ee Wasaaradda Duulista Hawada ee Puntland Cabdirshiid Maxamed Qaawane.